ब्लड क्यान्सरसँग लडिरहेका अर्घाखाँचीका ९ वर्षीय बालक नेपाल स्वयंसेवक संघ कि सदस्य बिनिता पाेख्रेलकाे भाई लाई सहयोग अपिल ! – Complete Nepali News Portal
ब्लड क्यान्सरसँग लडिरहेका अर्घाखाँचीका ९ वर्षीय बालक नेपाल स्वयंसेवक संघ कि सदस्य बिनिता पाेख्रेलकाे भाई लाई सहयोग अपिल !
काठमाडौँ । ब्लड क्यान्सरसँग लडिरहेका बिगत २ महिना देखि उपचाररत अर्घाखाँचीका ९ वर्षीय बालक नेपाल स्वयंसेवक संघ कि सदस्य बिनिता पाेख्रेलकाे भाई लाई काठमाडौं कान्ति बाल अस्पतालमा नेपाल स्वयंसेवक संघ का केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज पाैडेल र प्रचारप्रसार संगठन केन्द्रीय सचिव राजु गैरे बाबु संग भेटेर शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित सक्दाे सहयोगमा लाग्ने ।
अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका वाड नं १ घर भएका नारायण प्रसाद पोखरल र गीता पोखरेलका नाबालक छोरा बर्ष ९ का बिष्णुहरि पोखरेल ब्लड क्यान्सरसँग लडिरहेका छन् ।
उपचार खर्च निकै महङ्गो भएका कारण आफ्नो आर्थिक अवस्थाले उपचार सम्भव नभएकाले बालकका अभिभावकले सबैसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
तपाइँ हाम्रो सानो सहयोगले बाबुले नयाँ जीवन पाउने हुनाले सबैसँग सक्दो सहयोगको अपिल गरिएको छ ।
सहयोगका लागि खाता विवरण : पठाउने छाै ।